Ulwazi lwe-Saint Bernard Dog Breed Information kanye nama-FAQ - Izinhlobo
Ulwazi lwe-Saint Bernard Dog Breed Information kanye nama-FAQ
ISaint Bernards inamandla, mide ngokulingana, inamandla futhi inemisipha, inamabhonasi amakhulu futhi inesifuba esijulile. Abesilisa banesisindo esisukela kumakhilogremu ayi-170 kuya kwangaphezulu kwama-200 futhi bangaphezu kwama-intshi angama-27 emahlombe.
Ama-Bitches anesisindo esincane futhi okungenani anamasentimitha angama-25 emahlombe. I-St. Bernard yasekuqaleni inezinwele ezimfishane; izinhlobo ezinwele ezinde zavela maphakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye.
Imibala eyamukelekayo ifaka phakathi okumhlophe ngokubomvu, okubomvu nokumhlophe, nezimagqabhagqabha ezinokumakwa okumhlophe. 'Okubomvu' kungahluka kusuka kobomvu kuya kokuphuzi nsundu. Abaningi banesifihla-buso esimnyama emehlweni kodwa lokhu akuyona imfuneko.
Eminye Imibuzo Ongayithola NgeSaint Bernard
I-Saint Bernard ibonakala ivela ezinjeni zendabuko ebezilokhu zikhona e-Alps iminyaka eyizinkulungwane. Amabutho amaRoma awela eSwitzerland ngekhulu lesibili kungenzeka aletha ukumnika kwezinja zohlobo lukaMastiff.
Lezi zinja zakha isizinda sezinhlobo zanamuhla zaseSwitzerland, kufaka phakathi iSaint Bernard. Njengazo zonke izinhlobo zesimanje zaseSwitzerland, (kufaka phakathi i-Bernese Mountain Dogs, Great Swiss Mountain Dogs, i-Entlebuch Cattle Dogs, ne-Appenzell Cattle Dogs) lezi zinja zazisetshenziselwa imisebenzi ehlukahlukene kubandakanya ukugada, ukufuya, nokubhala.
Ngo-1000AD, lezi zinja zokhokho zazibonakala zaziwa futhi zibizwa nge- 'Talhund' (Valley Dog) noma 'Bauernhund' (Farm Dog) ngalesi sikhathi. Beza ngobukhulu nobukhulu obuhlukahlukene.
Ngo-1050AD, uMdikoni Omkhulu uBernard de Menthon wasungula indawo yakhe yokunakekela abagulayo eyaziwa kakhulu eSaint Bernard Pass, ebangeni elingamamitha angu-8000 ngaphezu kogu lolwandle, kubahambi abawela amaSwiss Alps akhohlisayo. Akekho owaziyo ukuthi izinja zalethwa nini okokuqala eHospice kusukela amarekhodi okuqala abhujiswa ngomlilo ngasekupheleni kwekhulu le-16.
Umbhalo wokuqala osindile wezinja ungowe-1707 futhi kusho ukuthi izinja zazizinze kahle ngalesi sikhathi futhi nomsebenzi wazo wawaziwa kahle. Imidwebo yokuqala yenja yaseHospice isukela ezithombeni ezimbili ezenziwe ngo-1695 ngumdwebi ongaziwa.
Le midwebo ikhombisa izinja ezifushane ezakhiwe kahle ezinemisila emide neziphawuda zamazolo, amakhanda wohlobo futhi acishe abe mhlophe: enye ingubo kanti enye ishisiwe. Kusukela kule midwebo, kusobala ukuthi lezi zinja zase zisunguliwe njengohlobo oluthile ngalesi sikhathi.
Amarekhodi azimele akhombisa ukuthi lezi zinja ekuqaleni zazisetshenziswa njengababheki nabangane bamaMonks. Njengoba iHospice yayihlukaniswe kakhulu nomhlaba wonke, ikakhulukazi phakathi nezinyanga ezinde zasebusika, ngokungangabazeki kwavela uhlobo oluthile lwezinja.
Lezi zinja ngabe zikhuliswe ukumelana nobusika obunzima, ngejazi elifushane, eliwugqinsi, elingafaki iqhwa nezinyawo ezigoqwe kahle zokuhamba eqhweni.
Ngenkathi amaMonks ethatha izinja ezihamba nazo ohambweni lwabo lomusa, kungenzeka ukuthi ngokushesha bathola ukuthi izinja zabo zingabahamba phambili abahle kakhulu futhi bekwazi ukuthola kalula abahambi abangenakuzisiza abalahlekile futhi bangcwatshwa izivunguvungu.
Kungenzeka ukuthi amaMonks aqale ngokuzala ngenhloso izinja ezihamba phambili zalezi zinja ukuze zizisize emsebenzini wazo, ziphinde zicwenge lolu hlobo. Futhi babenekhono: emakhulwini amathathu eminyaka amarekhodi atholakalayo e-hospice, iSaint Bernards ibe nesibopho sokusindisa izimpilo zabantu ezingaphezu kuka-2 000.
Ngezikhathi ezithile, ubusika obunzima ngendlela engavamile banciphisa isitoko sezinja ezizalisayo seHospice. Ngokuphikisana nomcabango odumile, izinja zagcwaliswa masinyane ezilwaneni ezinhle ezigodini eziphansi, eziningi zazo ezazivela emidlwane yensalela yaseHospice yeminyaka enabantu abaningi.
Inja yaseHospice ayikaze iwele nolunye uhlobo ngaphandle kwakanye ngo-1830 lapho amaMonks ezama isiphambano neNewfoundland. Umbono kwakuwukuthi iNewfoundland kwakuyinja yokufana nekhono elifanayo nenja yaseHospice, futhi ukwengezwa kwejazi elide kungakhuphula ukumelana kwabo nesimo sezulu esibandayo.
Ngeshwa, izinhlobonhlobo zezinwele ezinde zikhombise ukuthi ziphansi kunezinja ezinwele ezimfishane njengoba iqhwa lizokwakha ejazini elide. Ngemuva kwalokho, imidlwane eboshwe isikhathi eside eyazalelwa eHospice yanikezwa noma yathengiselwa abantu abasezigodini eziphansi.
Izinja ezinamakhanda amafushane zazikhethwa ezifundeni zezintaba zaseSwitzerland futhi ezinde ezinde zazinza kahle ezigodini ezingezinhle kangako.
Ukuqamba igama lozalo
Ngo-1800, i- “Hospice Dogs” nomsebenzi wazo zase zaziwa kahle, kodwa kuze kube manje, zazingenalo elinye igama. Mhlawumbe inja edume kakhulu emlandweni, uBarry, wayehlala eHospice phakathi kuka-1800 no-1810; ubizwa ngokutholwa okungama-40 futhi iminyaka ngemuva kwalokho, izinja zeHospice kwesinye isikhathi zazibizwa nge- 'Barryhunds' ukumhlonipha.
AmaNgisi ayengenise ezinye zezinja zaseHospice ekuqaleni kuka-1810 ukuqinisa ama-Mastiffs awo, abiza lezi zinja ngokuthi 'Ama-Sacred Hounds.' EJalimane, “i-Alpendog” yaphakanyiswa ngasekupheleni kweminyaka yama-1820.
UDaniel Wilson wabhekisa ku 'Saint Bernard Dog' ngo-1833, kodwa kwaze kwaba ngo-1880 lapho igama laqashelwa ngokusemthethweni ngohlobo lweSwitzerland Kennel Club.
Ngasekupheleni kwekhulu le-19 leminyaka, ukukhula kohlobo lwalube yingozi kancane. Abalimi abaningi ezigodini eziphansi bebengazaliseli ukuthayipha; izinja ezithunyelwa kwamanye amazwe zazivame ukungabi yizibonelo ezinhle, kanti iSt. Bernards eyasungulwa phesheya yayivame ukwehluka kakhulu esitokisini sokuqala.
Kwamanye amazwe afana neNgilandi, abaNgcwele babewelwa nezinye izinhlobo ukukhiqiza iSaint Bernards ezacile futhi ende. Ukubhekana nalesi simo, iSwitzerland Kennel Club (Schweizerische Kynologische Gesellschaft - SKG) yasungulwa ngonyaka we-1883 ngenhloso yokukhuthaza iSaint Bernard.
Lokhu-ke kwaholela kwi-International Congress eZurich yangonyaka we-1887 eyakha indinganiso yokuzalanisa amazwe wonke ngaphandle kweNgilandi (eyayisebenzisa indinganiso yayo) eyamukele.
UHeinrich Schumacher (1831-1903) ngalesi sikhathi wayeyigunya elihlonishwayo kulolu hlobo. Wayebandakanyeke kakhulu kuyo kusukela ngo-1855 ngenkathi eqala ezakhe imigqa ngenhloso yokuphinda enze 'uBarry'.
Ngosizo nokuvunywa kwamaMonks, wasungula ngokushesha izinhlobo zohlobo oluphakeme lohlobo azithumela futhi walusebenzisa ukwenza ngcono isitoko sendawo. Uqale incwadi yokuqala yezinja.
Ngenkathi ethathe umhlalaphansi ekuzaliseni izinja ngawo-1890s, waqhubeka nokuqondisa ukuthuthukiswa kohlobo kanye neklabhu yokuzalanisa waze wafa.
Ngenkathi intuthuko yanamuhla ngezitimela isinciphisile isidingo semizamo yokufuna nokutakula yamaMonks, iHospice iyaqhubeka nokugcina lezi zinja ukuze zihlanganyele futhi ihloniphe nobudlelwano bazo obusondele nomlando weHospice nomsebenzi wendabuko.
I-Saint Bernard E-US
Esikhathini esithile ngemuva kuka-1883, abantu ababedlala imidlalo yaseshashalazini eMelika babanjwa inja enkulu ebizwa ngokuthi iSaint Bernard.
Le nja, egama linguPlinlimmon, kwaba ngusanta wokuqala ukuba nomthelela e-U.S. Owazalwa ngoJuni 29, 1883, eNgilandi, uPlinlimmon kamuva walethwa eMelika ngumlingisi owamkhombisa emidlalweni yeshashalazi ezweni lonke.
Wawina imibukiso yezinja ngo-1884, kwathi iBest St. Bernard yaqanjwa ngo-1885. Ngalesi sikhathi, ezinye izinja ezazivela esiNgisini zangeniswa emazweni angaphandle, futhi ukuzalaniswa kwalezi zinja kwachuma. Kodwa-ke, njengoba kuphawuliwe ngaphambili, izinja ezingamaNgisi ngalesi sikhathi bezingelona iqiniso ukuthayipha.
Ngo-1888, iSt. Bernard Fanciers babuthana ndawonye futhi basungula iSt. Bernard Club of America (SBCA) futhi yaqaphela i-International Standard yango-1887. Kodwa-ke, abafuyi baseMelika babenelisekile ngohlobo lwesiNgisi, okwenza indida enkulu.
Manje babene-International Standard kepha babenezinja ezivela eNgilandi, ezazingahambisani ne-International Standard.
I-SBCA yahlelwa kabusha ngo-1897, yaphinda futhi ngo-1932. Ngalesi sikhathi, ukuzalanisa kwakuphathwa kakhulu ngabathengisi bezinja ababenolwazi oluncane lohlobo. I-American St. Bernard yase iba ukuhlangana kwemigqa yesiNgisi, yaseJalimane neyaseSwitzerland.
Kodwa-ke, amaFanciers amaningana angenisa izinja zaseJalimane naseSwitzerland ngokuthula ukuze zihlanganiswe ezinhlelweni zokuzalela. Laba Fanciers abambalwa babuqonda ubungako bokufuya izinja zamaNgisi ngenkathi bezibophezele kwi-European Standard.
Bavule indlela yokulungisa uhlobo lweSt. Bernard eMelika ngokukholelwa ukuthi uhlobo lokuqala luzophumelela ekugcineni.
Lokhu kungeniswa kweJalimane neSwitzerland kwenze imisebenzi yabo, futhi ukuvuselelwa kohlobo e-US kwaqala. Into ebaluleke kakhulu ekuzalelaneni okuqhubekayo kweSt. Bernard efanele, futhi manje esezingeni eliphansi lokuzala, ukuthi izinja ezinomlingiswa ovelele nekhwalithi zazinenani elikhulu legazi elibushelelezi kozalo lwazo.
Kubhalwe kahle ukuthi ubumnene bulahleka ngokushesha ngokuzaliswa okuqhubekayo kweSt. Bernards eboshiwe kuphela.
Kusukela ngo-1945, iningi lokungeniswa e-U.S. Bekulokhu kuyizinja eziboshwe ngokushelela, ezeduna nezinsikazi, ezibaluleke kakhulu ekuvuseleleni okuqhubekayo kohlobo. Ngawo-1960, uSanta oboshwe ngokushelela wayemukelwe eMelika njengomlingani obalulekile futhi olinganayo noSanta ogcotshwe kanzima.
Abangcwele namuhla baziwa yiwo wonke amakilabhu amakhulu ezindlwana, kufaka phakathi kepha kungagcini ku-American Kennel Club, iKennel Club yaseBrithani, iCanada Kennel Club, i-FCI, iSwitzerland Kennel Club, nokuningi.
I-Saint Bernard Club yaseMelika
I-Saint Bernard Club of America, Inc. (SBCA) isukela ngonyaka ka-1888 futhi ingenye yamakilabhu amadala kakhulu okwazisana yi-American Kennel Club. Inhlangano engenzi nzuzo, izinikele enhlalakahleni yaseSaint Bernard.
I-SBCA inamakomidi asebenzayo, azinikele ekusizeni ukuthi ujabulele iSaint Bernard yakho, kanye nokusiza iSaint Bernard ukuba iphile impilo ende, enempilo, futhi ejabule.
Ukwenza isibonelo, ukukhuthaza ubuhlakani namandla ohlobo, iKomidi Lezinja Elisebenzayo le-SBCA lisekela imisebenzi efaka umsebenzi wokudwetshwa nowokuphakanyiswa kwenqola, ukulalela kanye nokuqina. I-SBCA iphindze ikhutsate kutalaniswa nekukhonjiswa kwe-Saint Bernard.
Ngasikhathi sinye, inekomidi likazwelonke lezokusindisa elizosiza ukubeka abaNgcwele ngaphandle kwamakhaya. Ubulungu buvulekele wonke umuntu onentshisekelo ku-Saint Bernard futhi ovuma ukuthobela izinhloso zekilabhu.
Le kilabhu ibuye ibekwe icala lokugcina iStanded for the zohlobo kuleli. Qaphela ukuthi womabili amazinga aseBrithani nawaseSwitzerland ahlukile komunye nomunye nange-AKC Standard.
Buyela Kuhlu Lokuphakathi
Eyaziwa njengezinja ezinkulu ezitakula abantu eSwitzerland Alps, iSt. Bernards bathandwa kakhulu njengezinja zomndeni ezimnene ezinezinhliziyo ezinkulu nobumnene. Kepha cabanga ngokungathi sína ngakho ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo sokuletha eyodwa emndenini wakho.
Abangcwele badinga uthando oluningi nokuzinikela njengoba benikela ngokubuyisela. Ubukhulu babo bebodwa buchaza isidingo semikhuba eyisisekelo nokuqeqeshwa kokulalela kusenesikhathi.
Iqiniso lokuthi bakwazi ukubeka amakhanda abo etafuleni lasekhishini lifuna ukuthi bafundiswe imingcele yabo.
Yize abangcwele bekuthanda kakhulu ukuba nezingane zomndeni, ubukhulu babo budinga ukugadwa okuseduze. Abasoze alimaza ngamabomu elinye lamacala abo amancane, kepha inqina elikhulu noma umsila onamandla ungayiwisa ngengozi ingane.
Bangabahlanganyeli abanomdlandla kunoma imuphi umsebenzi womndeni futhi bazothuka uma bengafakiwe. Abangcwele abavamile ukukhonkotha ngaphandle kwesizathu esizwakalayo. Bangabaqaphi abahle nabavikeli bemindeni yabo, kepha akufanele neze bacatshangwe njengenja egadayo.
Ngenxa yobukhulu bawo obukhulu, kufanele ukhethe umdlwane ngokucophelela, ubheke imvelaphi yakhe ngezinkinga ezivamile zempilo nobumnene. Ngokuvamile, umfuyi womdlwane kufanele akwazi ukukunikeza ubufakazi bemvume yezempilo kubazali, futhi kufanele ukhululeke ngokuziphatha kwabaNgcwele abangcwele ekhaya lomzalisi.
Kubalulekile futhi ukuqala ukuqeqeshwa kokulalela nokwenhlalo esemncane ukuze kuqinisekiswe ukuthi banemikhuba emihle. Ngaphandle kobukhulu babo obukhulu nokuthambekela kwabo ukukhula ngokomzimba ngokushesha, abaNgcwele ngokuvamile bayaphuza ukukhula ngokomqondo, futhi ukuqeqeshwa kufanele kuqondiswe ngesandla esimnene, kodwa esiqinile, nesineke nokubambelela okuhle.
Ongcwele oqeqeshwe kahle kuyintokozo ukuyibona, futhi bayathanda ukujabulisa abaholi babo abangabantu.
Imidlwane eSanta ikhula ngesilinganiso esimangazayo phakathi nonyaka wokuqala wokuphila, ikhula ngosayizi olinganiselwa kumakhilogremu amathathu ngesonto. Badla ndawana thize phakathi kwezinkomishi ezi-6 nezingu-12 zokudla kwezinja ezisezingeni eliphakeme ngosuku.
Ama-Puppy Saints akufanele nanini ondliwe ukudla kwamaphrotheni amaningi, kepha kunalokho kufanele ondiswe ifomula yabantu abadala eliqukethe amaprotheni angama-22-26% namafutha ayi-12-15%. Ukudla okuphezulu kwamaprotheni kungadala ukuthi umdlwane oSanta okhula ngokushesha ukhule ngokushesha okukhulu, bese uthola noma yiziphi izinkinga zamathambo.
Kubalulekile ukuthi umdlwane oNgcwele udle okungenani ukudla okubili ngosuku, ukusiza ukuqinisekisa ukukhula okuzinzile ngesikhathi sokukhula kokuqala. Iningi labanikazi liyaqhubeka nalo mkhuba wokudla kabili ngosuku kukho konke ukuphila kwenja ukusiza ekuvikeleni ukuqunjelwa.
Ngoba bayephuza ukuvuthwa, amaSanta akufanele asunduzelwe ngokushesha okukhulu ekuqeqeshweni okusemthethweni nokujulile kwemisebenzi enzima yokudonsa isisindo, ukweqa okuphezulu, kanye nokugxuma okubanzi. Amathambo abo amakhulu amakhulu awaqedi ukukhula aze abe neminyaka emibili ubudala.
Imisebenzi elula njengokungena ngaphakathi nangaphandle kokulanda amaloli ingalimaza unomphela amathambo athambile kaSanta. Ngalesi sizathu, iSaint Bernard akufanele icelwe ukuthi igxume noma idonse imithwalo esindayo ngaphambi kweminyaka emibili ubudala.
Ngenkathi iSaint Bernards yabantu abadala ingadingi ukuzivocavoca okuningi, ingcono ngokuhamba ibanga elide nsuku zonke. Bazimisele futhi bayakwazi ukwenza okuningi kakhulu kunalokhu, futhi amakhono abo njengenja esebenzayo ayakhula ngokuqeqeshwa okuhle ngokomzimba.
Lapho behlinzekwa ngesimo esihle somzimba, Abangcwele bayizinja ezisebenzayo ezinamandla amaningi.
Abangcwele abaningi bayathanda ukudlala imidlalo futhi bafunde izinto ezintsha. Bacele ukuthi bakuthole lapho ucashe ekhabetheni. Phonsa okumnandi emoyeni futhi bazothanda ukukubamba.
Kungenzeka bangabi “nesikhumbulo esisheshayo” njengeGolden Retriever eseduze, kodwa umsebenzi bazowenza ngandlela thile uma ubacela ukuba benze njalo.
USaint Bernard ngeke “akudle ngaphandle kwekhaya noma ekhaya.” Iqiniso ukuthi, iSaint Bernard ingavuswa futhi inakekelwe ngokudla okungaphezu kwalokho okudingekayo kwezinye izinhlobo ezinkulu. Njengoba oSanta empeleni izinja ezinamahloni, ngokuvamile zidinga ukudla okuncane ngekhilogremu ngalinye lesisindo somzimba kunezinhlobo ezincane kakhulu, ezisebenza kakhulu.
Imidlwane eyiSanta inesisindo esingaba yiphawundi elilodwa nohhafu lapho izalwa futhi ikhula ngokushesha phakathi nonyaka wokuqala, noma kungathatha isikhathi esingangeminyaka emithathu ngaphambi kokuba ivuthwe ngokugcwele. Abesilisa abadala bangafika kubude obungamasentimitha angama-28-30 ehlombe futhi ngokuvamile bayoba nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu ayi-140 kuya kwayi-180.
Owesifazane mncane ngandlela-thile cishe ngamasentimitha angama-26-28 ehlombe futhi ngokuvamile usukela kumakhilogremu ayi-120-140.
Impela. Banokuqonda kwendlela yengane futhi baqaphela ngokumangazayo ukuthi bangalimazi ingane. Bangabagcini bezingane nabangane abahle kakhulu. Ngokwemvelo, ingane akufanele ivunyelwe ukuhlupha noma iyiphi inja, kungakhathalekile ukuthi izalwa ngaziphi izinhlobo.
Ngenxa yobukhulu besilwane, iSaint Bernards KUMELE iqeqeshwe futhi lokhu kufanele kwenziwe kusenesikhathi ezimpilweni zayo. Ngenhlanhla, abangcwele bakulangazelele ukujabulisa futhi bazoqala ukuphendula imiyalo ngokushesha lapho beqonda ukuthi ufunani kubo.
Yebo: kabili ngonyaka, imvamisa eSentwasahlobo naseKwindla, balahlekelwa amajazi abo amaningi ukubasiza ukujwayela izinkathi zonyaka eziguqukayo. Esikhathini esisele sonyaka, kuyaqabukela kube khona ukucasuka okuvela ekuchithekeni.
Yebo. Ngokuya ngesimo sezulu, izinga lesasasa, nokuma kwezinyoni zenja, iningi labangcwele lizoconsa amathe ngezikhathi ezithile. Ngokobuchwepheshe, ayikho into efana nokuthi “uSomlomo onomlomo owomile”, kepha iningi labangcwele aliconsi amathe ngokweqile.
Ingabe bayizinja zokubuka ezinhle?
Ubungako begxolo likaSanta kuzodikibalisa abangena kakhulu, kepha bazofunda ukubona abangane bakho futhi ubamukele ngokufudumele. Uma isigelekeqe sithola ngosayizi nokukhonkotha, uSanta wakho anganquma ukuhola umhlaseli aqonde esiliva lomndeni ngoba bangathanda kakhulu ukuba abangane babo bonke.
Okuhlukile kulokhu kulapho ilungu lomndeni lisongelwa. Imvelo kaSanta yokuvikela labo abathandayo iyabonakala ngalesi sikhathi.
Kungani amanye amaSaint Bernards enezinwele ezimfishane?
AmaSaint Bernards okuqala ayeyizinja ezinenwele ezimfishane. Eminyakeni engaphezu kwengu-150 eyedlule, amaMonks aseSwitzerland abona kunesidingo sokuletha igazi elisha ekuzaleni kwawo futhi ahlanganisa iNewfoundland ebiyelwe isikhathi eside nabaNgcwele.
Namuhla, ithonya lalokho kuzalisana lisenathi futhi sinezinwele ezinde nezinwele ezimfishane iSaint Bernards.
Badinga ukuvivinya umzimba okungakanani? Ngabe umuntu angagcinwa efulethini?
ISaint Bernards ayidingi ukuzivocavoca okuningi njengezinye izinhlobo eziningi, kepha kufanele kuhlinzekwe igceke elibiyelwe ukuze bakwazi ukuthola noma yiliphi inani abalidingayo. Ohlala efulethini kufanele ahanjwe kaningi ukuze enzele ukuzivocavoca abebengakuthatha ngesikhathi sabo sokuphumula. Akuwona umkhuba omuhle ukugcina iSaint Bernard iboshiwe.
Badinga ukunakekelwa okungakanani?
Amanzi ahlanzekile ahlanzekile (ikakhulukazi ehlobo), ukudla okunomsoco kanye nokuxubha ngokuphelele masonto onke, isibhamu sokuzivikela esidingekayo kanye nokusebenzisa ingqondo kakhulu konke okudingekayo.
Kufanele ngithole owesilisa noma owesifazane?
Lokhu empeleni kuyindaba yokuzikhethela komuntu siqu. Zombili ziyalingana ngezimfanelo zesilwane. Eyesilisa, ekubeni inkulu, iyahlaba umxhwele lapho ibukwa okokuqala. Owesifazane, nokho, kufanele abhekwe njengolingana naye kuzo zonke ezinye izici.
Lapho usuthathe isinqumo owesilisa noma owesifazane ozokhetha kuzoba okulungile: uzoba nesilwane esinothando futhi ube nesipiliyoni esihle kakhulu.
Bachuma kanjani lapho kushisa?
Izinja zizokwenza kahle uma nje zinendawo epholile eyomile yokulala kanye namanzi amaningi apholile. Bazonciphisa ukudla kanye nenani lomsebenzi abawenzayo. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukusuka endaweni enesiphephetha-moya ungene lapho kushisa khona kungaba yingozi.
Ushintsho olungazelelwe lokushisa luyoba nzima kakhulu kuSanta.
Ngiyithenga kuphi iSaint Bernard?
Kukhona abalimi ezindaweni eziningi abanesifiso esiqotho sokukunikeza oNgcwele ozoziqhenya ngokuba nabo. Kulaba bafuyi, inja ingaphezulu kakhulu kwento okumele ithengiswe ngenzuzo.
Intshisekelo yabo isesilwaneni futhi ibafanise nekhaya elifanele. Bazimisele ukukusiza ngokunakekela, ukondla nokuphendula imibuzo yakho.
ISaint Bernards, njengezinye izinhlobo eziningi, ingaba nezinkinga ezithile lapho abalimi abahloniphekile bezama ukuzala. Umfuyi onedumela futhi onolwazi uzojabula ukuxoxa ngalokhu nokunye ukukhathazeka kwezempilo nomthengi womdlwane.
Ngenxa yobukhulu bawo obukhulu, iSaint Bernards ithambekele ikakhulukazi kwi-Hip Dysplasia, isifo esihlangene esingagcina sikhubaze izinja, kuye ngobukhulu baso. Imininingwane evela ku-Orthopedic Foundation for Animals ikhombisa isilinganiso esilinganiselwa kuma-49% ama-x-ray athunyelwe kuwo ukuze ahlolwe ehlolwa njenge-dysplastic.
Njengoba ama-x-ray amaningi engakaze athunyelwe ku-OFA lapho kukhona okusobala ukuthi akulungile, isilinganiso sangempela singaphezulu kakhulu.
Ngenxa yalokho, kufanele uphikelele kubazali banoma yimuphi umdlwane ocabanga ukuthi uqinisekiswe yi-OFA. Cela ukubona izitifiketi futhi ungazamukeli izaba zokushoda kwesitifiketi se-OFA. Ngokufanelekile, ogogo nomkhulu kanye nabasebenza ngodoti babazali nabo kufanele babe nesitifiketi se-OFA.
Njenganoma yiluphi uhlobo olukhulu noma olukhulu, ukunakekelwa kumele kuthathwe ukuze kungadliswa ngokweqile noma kwengeze imidlwane emincane. Ukukhula ngokushesha okukhulu noma isisindo eseqile kungabeka ukucindezeleka okungadingekile kumajoyini amancane asakhula futhi kubangele noma kubhebhethekise izinkinga ezindololwaneni noma ezinqeni.
Xhumana nomfuyi wenja yakho ukuthi kufanele nini ukushintshela kwifomula yabantu abadala futhi ubheke izinga lokukhula kwesisindo sikaSanta wakho eduze. Abangcwele baqhubeka bekhula futhi bavuthwe okungenani iminyaka emithathu yokuqala, akukho ukushesha ukufika kusayizi ogcwele!
Njengezinhlobo eziningi ezinkulu, iSaint Bernards ivame ukuba nezimpilo ezimfushane kusuka eminyakeni engu-7-11. Abantu abambalwa bangaphila isikhathi eside, kepha izimpilo ezimfishane zingumthetho hhayi okuhlukile.
Kufanele uhlole ngezinye izimo abaSanta abangazithola, njenge-entropion (isimo sejwabu leso) nesifo sokuwa. Futhi, umfuyi ohloniphekile uzokhuluma ngokukhululeka nangokungagunci ngalezi zinkinga.
Ngaphezu kwalokho, njengakwezinye izinhlobo zesayizi nohlobo olufanayo, iSaint Bernard ingahle ibe nezinkinga ezinjengokushisa nokushisa. Kufanele uxoxe ngalezi zimo nodokotela wezilwane wakho ukuze uqonde ukuthi ziyini izimpawu zokuxwayisa futhi ufune ukunakekelwa kwezilwane ngokushesha uma kwenzeka kwenzeka.
Ngohlobo olukhulu kangaka, kufanele uhlele kusengaphambili ukuthi uzokwenzenjani uma inja yakho ingawa (nganoma yisiphi isizathu) njengoba inkulu kakhulu ukuthi ingathwalwa.
Imibuzo Ephezulu Ngohlobo Lokuzala Inja Ye-Briard
abiza malini ama-rhodesian ridgebacks
ilebhu ephuzi nomxube we-pitbull